Ukuphupha ngeempahla zethu kudlala indima ebalulekileyo kubomi bethu. Kuyasikhusela kwiimpembelelo zokusingqongileyo, kusigcina sishushu kwaye somile. Igubungela iindawo ezisondeleyo zomzimba wethu ezinjengeempundu kunye namalungu esini. Impahla yethu inefuthe kwimvakalelo yomzimba wethu, ichonga inkangeleko yethu kunye nendlela abanye abasijonga ngayo. Izigqibo malunga nelizwe, imeko yezempilo, […] ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ngeempahla zethu kudlala indima ebalulekileyo kubomi bethu. Kuyasikhusela kwiimpembelelo zokusingqongileyo, kusigcina sishushu kwaye somile. Igubungela iindawo ezisondeleyo zomzimba wethu ezinjengeempundu kunye namalungu esini. Impahla yethu inefuthe kwimvakalelo yomzimba wethu, ichonga inkangeleko yethu kunye nendlela abanye abasijonga ngayo. Isiphelo kurhulumente, imeko yezempilo, […] Iimpahla zethu zidlala indima ebalulekileyo ebomini bethu. Kuyasikhusela kwiimpembelelo zokusingqongileyo, kusigcina sishushu kwaye somile. Igubungela iindawo ezisondeleyo zomzimba wethu ezinjengeempundu kunye namalungu esini. Impahla yethu inefuthe kwimvakalelo yomzimba wethu, ichonga inkangeleko yethu kunye nendlela abanye abasijonga ngayo. Isiphelo kurhulumente, imeko yezempilo, […]